Macalin Wenger Oo Shardi Adag Ku Xiray In Arsenal Ay Xagaagan Ku Guuleysto Tartanka Europa League %
Tababaraha kooxda kubada cagta Arsenal, ninka lagu magacaabo Arsena Wenger, ayaa wuxuu daboolka ka qaaday in naadigiisa ay tahay mid fursad uhaysata ku guuleysiga fasal ciyaareedkan ee tartanka xiisaha leh ee Europa League.
Gunners-ka ayaa waxay ku wajaheysaa caawa oo Khamiis ah dhigeeda AC Milan lugta koowaad ee wareega 16-ka tartankaan, waxaana uu ka dhici doonaa kulankaan, garoonka San Siro, oo ay ku dheesho kooxda wadanka Talyaaniga ka dhisan.
Wenger oo ka hor ciyaartaan uwaramay warbaahinta ayaa wuxuu nuux-nuux saday in ku guuleysiga tartanka Europa League ay kaliya ka xigto kooxdiisa sida ay ula falgasho kulamada ay ka ciyaareyso, isagoona cadeeyay inay tayo iyo xoog ay ubaahan yihiin.
“Waxaan umaleynayaa inaan sameyn karno sida sanadkii hore,” ayuu Wenger ku jawaabay mar la su’aalay hadii ay Europa League uqaadi karaan sidii ay FA Cup-ka ugu guuleysteen fasal ciyaareedkii hore ee aynu kasoo gudubnay.
“Sanad ciyaareedkii hore, waxaan ku guuleysanay FA Cup-ka, horyaalka waxaan ka shaqeysanay 75 dhibcood, laakiin sanadkaan waxaan umaleynayaa in aanan gaari karin dhibcahaan oo kale,” ayuu hadalkiisa kusii daray.
“Marka walba kama dhigi kartid adiga kuwa adag ama fudud, laakiin waxaa ka horeysa inaad qabato shaqadii aad meeshaas ku gaari lahayd, waxaana sheegi karnaa inaan hada ku socono wadadaas, waxaana ubaahan nahay tayo iyo xoog,” ayuu kusii xiray.
Mascherano Oo Ka Hadlay Hadii Uu Ka Shalaynayo Ka Tagista Barca & Aadista Horyaalka Shiinaha